आजबाट काठमाण्डौमा थप लकडाउनमा कडाइ ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/आजबाट काठमाण्डौमा थप लकडाउनमा कडाइ !
कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको भित्री क्षेत्रमा स्थानीयले नै ‘लकडाउन’लाई कडा बनाउन थालेका छन् । कामपाको भित्री क्षेत्रका नागरिकले टोलटोलमा खटिएर कडा गरेका हुन् । कोही नागरिक अनावश्यक बाटामा हिँडेको पाइए सम्बन्धित वडाका युवाले जहाँबाट आएको हो त्यही फर्काउन थालेको छ । खाद्य सामग्रीको पसलमा पनि प्रवेश स्थानमा नै टोरी टाँगेर उपभोक्तले बाहिरैबाट पैसा दिने र सामग्री लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस स्थानमा स्थानीय युवा स्वयंसेवकका रुपमा खटी लकडाउनको पालना गराएका छन् । केही दिनअघि मात्र लकडाउनको खासै पालना भएको नदेखिने यी स्थानमा अहिले पूर्णपालन भएको छ । अहिले यी स्थानका घरमा कोही नयाँ मान्छे आए पनि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी हुने गरेको छ । नयाँ मान्छे नल्याउन र कोहीकहीँ नजानका लागि सबैलाई सम्बन्धित वडाले कडा गरेको छ कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अवस्था जटिल बन्दै गएकाले अब नागरिक अटेर गरी सडकमा निस्के केन्द्र सरकारको सहयोगमा थप कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।” कामपाले जोखिम हुन नदिन उपत्यका प्रवेश गर्ने र जाने क्रमलाई तत्काल रोक्न केन्द्र सरकासँग माग पनि गरेको जनाएको छ
यो पनि पढ्नुहोस : लकडाउनको सदुपयोगः खरको छानामुक्त वडा बनाउन सफल
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले वडा नं. ३ भकिम्लीलाई ‘खरको छानामुक्त वडा’ बनाउन सफल भएको छ ।
रकम अभावमा जस्तापाता खरीद गर्न नसकेर खर तथा परालले छाना छाउँदै आएका नागरिकको घर नगरपालिकाले जस्ता पाताले छाइदिएको हो । बन्दाबन्दीको सदुपयोग गर्दै बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका जनप्रतिनिधिले खरको छानामुक्त वडा बनाउन सफल भएका हुन् ।
खरको छानामुक्त वडा बनाउने अभियान स्वरुप नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । वडाभित्रका गरिब, दलित र निम्न आय भएका व्यक्तिका छाना फेरिएको छ । त्यसैगरी २१ जना एकल महिलाका पनि छाना फेरिएको वडाध्यक्ष पुनले बताउनुभयो । नगरपालिकाको रु २० लाख २४ हजार अनुदानमा जस्तापाता खरिद गरेर छाना परिवर्तन गरिएको बेनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
होटेलको गेटमा पु´रुषको श व
कवाड टिप्ने व्यक्तिको हुलिया बनाइ काठमाडौँमा सुन पसल चो’री